ဗဟိုအမျီုးသမီးဆေးရုံမှ မီးဖွားခါနီး အမျိုးသမီးတွေဆီကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း – XB Media Myanmar
ယွန်းယွန်းကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အကယ်ဒမီတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ။ အခုအချိန်မှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေသလို ပရိ သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်အဖြစ်ရပ်တည်နေဆဲပါ။ ယွန်းယွန်းကတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းလေ့ရှိသူပါ။
အခုလည်း ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး “ဒီတစ်ခေါက်တော့ မမ ဗိုက်တွေဆီရောက်ဖြစ်တယ်..ခုချိန်မှာ ကလေးလေးမွေးဖို့ဆေးရုံတက်ရတာတောင် အထီးကျန်ပါ တယ် လူနာစောင့်တွေအများကြီးနေခွင့်မရပါဘူး မွေးခါနီးမှပေးလာတယ်ပြောတယ်!! လှူစရာ နေ ရာတွေစဉ်းစားတဲ့အခါ “ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ” လေးလဲသွားလို့ရပါတယ်လို့” ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးသားဖော်ပြလာတာပါ။ ယွန်းယွန်းကတော့ ကိုယ်တိုင်လှူဒါန်းခဲ့သလို အ ခြား သူတွေကိုလည်း လှူကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။
ယွန်းယွန်းကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်သောင်းစီနဲ့ အမျိုးသမီး(၂၅)ဦးကို လှူဒါန်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မွေးနေ့မှာ ထပ်မံလာရောက်မယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်။ ဆထက်တံပိုး အလှူပြုနိုင်ပါစေ ယွန်းယွန်းရေ…
Source : YoonYoon
ယြန္းယြန္းကေတာ့ အသက္ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔အကယ္ဒမီေတြကိုရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အႏုပ ညာ ရွင္ တစ္ေယာက္ပါ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုဆက္တိုက္လုပ္ကို င္ေ န သလို ပရိ သတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္အျဖစ္ရပ္တ ည္ေ နဆဲပါ။ ယြန္းယြန္းကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ သြားေရာက္လႉဒါန္းေ လ့ရွိသူပါ။
အခုလည္း ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံကိုသြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး “ဒီတစ္ေခါ က္ေတာ့ မမ ဗိုက္ေတြဆီေရာက္ျဖစ္တယ္..ခုခ်ိန္မွာ ကေလးေလးေမြးဖို႔ေဆး႐ုံတ က္ရတာေတာင္ အထီးက်န္ပါ တယ္ လူနာေစာင့္ေတြအမ်ားႀကီးေနခြင့္မရပါဘူးေမြးခါနီးမွေပးလာတယ္ေျပာတယ္!! လႉစရာ ေန ရာေတြစဥ္းစားတဲ့အခါ “ဗဟိုအ မ်ိဳး သမီးေဆး႐ုံ” ေလးလဲသြားလို႔ရပါတယ္လို႔” ဆိုၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္မွာ ေရး သားေဖာ္ျပလာတာပါ။ ယြန္းယြန္းကေတာ့ ကိုယ္တိုင္လႉဒါန္းခဲ့သလို အ ျခား သူေ တြကိုလည္း လႉၾကဖို႔တိုက္တြန္းထားပါေသးတယ္။
ယြန္းယြန္းကေတာ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေသာင္းစီနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး(၂၅)ဦးကို လႉဒါန္းခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေမြးေန႔မွာ ထပ္မံလာေရာက္မယ္ လို႔ဆိုထားပါေသးတယ္။ ဆထက္တံပိုး အလႉျပဳႏိုင္ပါေစ ယြန္းယြန္းေရ…
မယ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အ ရမ်း လန်းနေတာကို အမြင်မကတ်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ မမဆောင်းရဲ့ဗီဒီ ယိုဖိုင်